Umaki: ibhizinisi ngaphakathi | Martech Zone
Umaki: ngaphakathi ebhizinisini
I-pivot yesikhathi sobhadane eya e-commerce ize nokulindelekile okulindelwe ngabathengi. Uma sekungezwe inani, iminikelo eku-inthanethi manje isiyindawo yokuthinta yamakhasimende eyinhloko yemikhiqizo eminingi yokuthengisa. Futhi njengomugqa ophambili wokuxhumana kwamakhasimende, ukubaluleka kokusekelwa kwamakhasimende okubonakalayo kuphakeme ngaso sonke isikhathi. Insizakalo yamakhasimende e-E-commerce iza nezinselelo nezingcindezi ezintsha. Okokuqala, amakhasimende asekhaya asebenzisa isikhathi esiningi online ngaphambi kokwenza izinqumo zokuthenga. Bangu-81% abaphendulile abacwaninge imininingwane yabo